Grey ukubola | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Grey ukubola
Ubani nokuthi yini ehlukumeza ama-raspberries
I-Raspberries iyisiko ephilayo njengamazambane anamatamatisi. Ngakho-ke, kuvezwa amagciwane ahlukahlukene, amabhaktheriya nezinambuzane ezingalimaza kakhulu lezi zitshalo. Kungcono ukuqaphela nokuvimbela ukuthuthukiswa kwesifo ngokuhamba kwesikhathi kunokulinda kuze kudlule yedwa. Ezinye izinambuzane nezifo zingaholela ekubhujisweni kwezinhlanzi, okuyinto ezoba yinto emangalisa kakhulu kuwe.
Kungani amaqabunga e-geranium ephenduka aphuzi, ukwelashwa kwegeranium
Kuphephile ukusho ukuthi wonke umuntu unezintambo zasendlini endlini, kodwa izakhamuzi zezwe lethu zinothando olukhethekile lwegeranium. Uyazi? Ikhaya le-geranium libizwa nangokuthi "pelargonium". Izinambuzane eziyinhloko ze-geranium Geranium, njenganoma yisiphi esinye isitshalo, inezitha eziningi. Izifo ezihlukahlukene nezinambuzane zingabangela umonakalo omkhulu ekamelweni legeranium.
Izinkinga zokukhula kwe-chubushnik esiteshini sakhe
I-Chubushnik isitshalo somndeni wakwaHortensia. Lesi sihlahla esinemibala emihle emhlophe nephunga elimnandi kungadideka ne-jasmine. Lesi sihloko sisho ukuthi kungani kufanelekile ukutshala ingadi jasmine nokuthi ungayenza kanjani. Sizocabangela ukunakekelwa okufanele kwabo kanye nezinhlobo zezitshalo zokukhiqiza kanye nesikhathi sonyaka lapho kudingeke ukuba utshale ubuso obunzima.
Izici zezimboni ezikhulayo engadini
Yithande abanikazi bekhanda hhayi kuphela amaqabunga amahle amahle, kodwa futhi nokungazitholi. Noma kunjalo, amaqabunga okuhlobisa axazulule okuningi. Bakha isizinda esimangalisayo esihle kakhulu kwezinye izitshalo, futhi izimbali zesitshalo ngokwazo ziyathandeka kakhulu. Uyazi? Khost ivela egameni lesiLatini elithi Hosta futhi linamanye amagama - funky.
Garden Gerbera: ukutshala nokunakekelwa
I-Gerbera iyisitshalo esingapheli somndeni weCompositae. Kunezinhlobo eziningi ze-gerberas, ezihlukaniswa umbala, i-terry kanye nohlobo lwe-inflorescence. Ake sibuke imibuzo mayelana nokuthi zingaki iziqhumane ze-gerberas, indlela yokutshala nokuzinakekela. Izinhlobonhlobo ezithandwayo kakhulu zensimu ye-jerbera Namuhla, izinhlobo ezingu-80 zale mbali enhle ziyaziwa.
Izifo nezinambuzane ze-begonias: incazelo yabo nezindlela zokubhekana nazo
Phakathi kwezitshalo zasendlini, u-begonia ungomunye wabathandekayo kakhulu, ngoba uhlukaniswa hhayi kuphela nezimbali zalo ezinhle, kodwa futhi ngamaqabunga akhangayo kakhulu. Kodwa ukunakekelwa kwalesi sitshalo kudinga okuningi, ngakho ngezansi sizoxoxa ngezifo ezidume kakhulu ze-begonias namaphutha ekulimeni kwawo. Izinkinga nge-begonias ezihlotshisiwe zokuhlobisa ngenxa yezimo ezikhulayo ezingenakulungiswa nokuzinakekela. Ngokuvamile, izinkinga ezine-begonias ezikhulayo zivela ngoba imbali ingabhekwa kahle.
I-Chrysanthemum - i-samurai flower
Lesi sihloko sigxile "emifuleni yama-Samurai" - i-chrysanthemum. Sizokukhuluma ngendlela yokunakekela i-chrysanthemum, ukuthi uyayithanda kanjani inhlabathi nokuthi udinge kangakanani ukuphuza isitshalo. Cabanga ngezinambuzane ezikhona futhi uzifundise ukulwa. Sizokutshela indlela yokufeza izimbali ze-chrysanthemums ezinethezeka. Uyazi?
Iyini ugqumugqumu ogulayo nokuthi ungayiphilisa kanjani
Ugqumugqumu ukwanele ngokugcwele kwezifo nezinambuzane. Kodwa ubhekene nezifo eziyingozi. Isifo se-ugqumugqumu singelashwa ngokunakekelwa okufanele, ukuvimbela kanye nokulawula ngesikhathi. Amazolo kaMealy: indlela yokubhekana nesifo sofungal Isikhathi esiningi, lesi sifo sesifubane sitholakala kwi-jumelomu ngesimo seqhwa elimhlophe elihlanganisa amajikijolo we-shrub.
Izifo nezinambuzane zamakhabe, izinkinga eziyinhloko zokukhula
I-melon ingaba ngaphansi kwezifo ezihlukahlukene ze-fungal, amabhaktheriya nezifo ezibangelwa amagciwane, okuholela ekunciphiseni izinga lokukhiqiza nezithelo. Izinambuzane ezihlukahlukene ezondla uketshezi kwalesi sitshalo nazo zibangele ukulimala okungaka. Ngakho-ke, ukwazi ngakho kuyadingeka. Namuhla sibheka izifo ezivame kakhulu zezimboni nendlela yokuphatha ngayo, futhi ukhuluma ngezinambuzane zamakhabe kanye nendlela yokulwa nazo.
Indlela yokuvimbela nokwelapha ama-orchid ngezifo
Namuhla, i-orchid ayiyona isitshalo esingavamile esivandeni sembali ekamelweni. Noma kunjalo, kuncike ezifweni ezihlukahlukene futhi kudinga ukunakekelwa okukhethekile. Ngeshwa, kunzima ukuthola noma yiluphi ulwazi oluphelele mayelana nokugcinwa kwembali, izifo ze-orchid kanye nokwelashwa kwazo. Ngakho-ke, sazama ukumboza izinkinga ezivamile nezinkinga ze-orchid ezikhulayo.
Indlela yokubhekana nesifo se-blackberry
Indawo engokwemvelo yama-blackberries, amahlumela anameva aqhekekile kanye namajikijolo amnyama amnandi kakhulu - lena eNyakatho Melika nase-Eurasia. Umsebenzi wokukhiqiza owenziwe kakhulu ekuhlaleni izinhlobo zebhisidijolo uye wenziwa kusukela ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye e-United States (izinhlobo ezingaphezu kwezingu-300 ziye zavuthwa). Ukuthandwa kwalesi berry ezweni lakithi kuyanda - inamba ekhulayo yabalimi isiqala ukwazisa i-blackberry kuye: ukunambitheka okumnandi nomnandi; izakhiwo zokwelapha nezomsoco; isivuno esikhulu; ukungathobeki nokukhululeka ukunakekelwa; ukukhubazeka kwezifo ezibuthakathaka.
Izifo ze-strawberry: ukuvimbela, izimpawu kanye nokwelapha
Lapho kuqala ihlobo, wonke umuntu ulindele ngokulangazela ukuvuna ama-strawberries. Kodwa-ke, ama-strawberries afinyelele kunani elikhulu lezifo, kanti izinyathelo zokwelashwa zidinga ukuthathwa ngesikhathi. Uma kungenjalo, kukhona usongo lokuhlala ngaphandle kokunambitheka. Lesi sihloko sichaza izifo ezivame kakhulu zezimila, izibonakaliso, ukwelashwa nezindlela zokuvimbela ezokusiza ukugcina ama-strawberries futhi ujabulele ukunambitheka okuvela kuNkulunkulu kwezithelo zawo.
Izifo nezinambuzane zama-cannon nendlela yokubhekana nazo
I-Kanna iyisitshalo esithandayo nabalimi nabalimi abanezimbali ezingajwayelekile. Kodwa-ke, kwenzeka ukuthi i-canna yenqabe ukuqhakaza, nakuba kubonakala sengathi zonke izimo ezidingekayo zazo zenziwe. Impendulo yombuzo othi kungani amathononi ahlukumezayo angashintsha esimweni ngasinye, kodwa isizathu esijwayelekile sihlale sinakekelwa okungalungile.
Izifo nezinambuzane ze-petunia: izinkinga eziyinhloko ekukhuleni
I-flower enhle futhi enhle ye-petunia, nakuba iphikisana nazo zonke izifo zezifo futhi ijwayele ukukhula ezimweni zomswakama ophakeme nokushisa, kodwa siyi-garden yangaphambili ukuhlolwa kwangempela. Eziningi zezinambuzane nezifo zingena engadini kanye nezithombo, ngakho-ke uma ufuna ukukhula petunia endaweni yakho, kufanele wazi kancane ukuthi ungabhekana kanjani nezifo ezihlukahlukene kanye nezidumbu.
I-almond: ukuphathwa kwezifo ngesikhathi esifanele nokunciphisa izinambuzane
I-almond - i-handsome eseningizimu eneqhwa elimnandi eliqhakazayo nezithelo ezibaluleke kakhulu. Isitshalo se-alimondi sinikezwa kokubili ngesibhakabhaka nezihlahla ezide. Izihlahla zama-alimondi kusukela ezikhathini zasendulo zazikhule ngabantu, futhi ukukhulunywa kokuqala kwama-alimondi kutholakala emibhalweni yama-Asiriya asendulo neBhayibheli. Nokho, ukudla akusetshenziswanga izithelo zama-alimondi ngokwabo, kodwa kuphela amathambo abo.
Indlela yokuvikela i-spruce kusuka ezifweni
Ngamunye wethu angathanda ukuba nomuthi omuhle we-fir esiqhingini. Noma kunjalo, lesi sihlahla singenangqondo futhi sibhekene nezifo eziningi. Ukuze ukhule i-spruce enhle, emide, enesibindi, udinga ukubeka umzamo omkhulu. Into ebaluleke kakhulu ukunakekelwa okufanele. Kulesi sihloko sizocabangela ukuthi yini engabangelwa yizifo nokugula kobuhle behlathi.
Izifo zokusajingijolo eziyingozi: ukuvimbela, izimpawu kanye nokwelapha
Naphezu kwemizamo yabalimi yokuthuthukisa izinhlobo zokusajingijolo eziphikisana kakhulu nezifo namagciwane, izitshalo zisabonakala zikhona. Lesi sihloko sichaza izifo ezitshalo ezivame kakhulu, izimpawu zabo nezindlela zokulawula. I-anthracnose e-Raspberry Anthracnose iyi-fungus ebonakala njengamabala ezitsheni zokusajingijolo.
Indlela yokunakekela i-cleavia endlini
UClarvia, noma uKaffir Lily, ungowomndeni wakwa-Amaryllis. Lezimbali ezimilayo zasendle zitholakala ensimini yaseNingizimu Afrika, kanti nanamuhla izinhlobo ezintathu kuphela zalesi sitshalo ziyaziwa. Ngenxa yezimfanelo zayo zokuhlobisa, ukungathobeki nokunethezeka kokunakekela, i-clivia ithandwa kakhulu ekulimeni.